US inopasisa bhiri yekurambidza kutengwa kwezvinhu zveHuawei | Linux Vakapindwa muropa
Iyo US / Huawei nyaya ichiri kupa zvakawanda zvekutaura nezvazvo uye ndizvo Ini handina kukwana kuUnited States naTrump nekushandisa danho rakasimba kupokana neHuawei nekuiisa mukati memazita ake akakurumbira uye zvakare kuyedza kukanganisa sarudzo dzenyika dzeEurope kuitira kuti vasafunge nezveHuawei senzira yekushandisa 5G mumatunhu avo.
Kana zvisiri, vakavhurawo chikumbiro chekumira kudya zvigadzirwa zveHuawei muUnited States. Uye ndizvo nguva pfupi yadarika kubvumidzwa kwebhiri kwakaziviswa , que inorambidza kutengwa kweHuawei zvigadzirwa neFederal zviwanikwa.
Uye kunyange parizvino vanoverengeka vanopa mafoni muUnited States vachiri kushandisa michina yeHuawei / ZTE pamambure avo, mutemo mutsva unogona kuvakanganisa zvakanyanya. Zvakanaka ikozvino vanogona kufunga kuti makambani aya sekutyisidzira kuchengetedzwa kwenyika.
Thursday, United States Senate yakabvumirana mutemo kuti igadzire bhiriyoni remadhora izvo zvinobatsira vashoma venhare vanopa kubvisa uye kutsiva Huawei uye ZTE network michina.
kunze kwaizvozvo bhiri iri rinorambidza zvakare vanoshanda nenhare kushandisa mari yeFederal Communications Commission kutenga zvigadzirwa zveHuawei kana ZTE.
Mutemo mutsva, unonzi "Wakachengeteka uye Unovimbwa Netiweki Mitemo Mutemo" Iyo "Yakachengeteka uye Yakavimbika Netiweki Networks Mutemo" yakatenderwa nekushevedzera muImba muna Zvita.
Izvo hazvitaure zita reHuawei kana ZTE, asi inotaura izvozvo iyo FCC inofanirwa kuburitsa runyorwa rwevanopa zvekushandisa "vachiisa njodzi dzekuchengetedza nyika" uye inorambidza vanopa rubatsiro veInternet uye makambani efoni kushandisa mari yeCCC kutenga, kubvarura, kubhadhara kana kuchengetedza michina nemasevhisi emakambani aya.
FCC yakanga yatotora matanho kune imwe yekambani munaNovember apfuura, payakaona Huawei sengozi yekuchengetedzwa kwenyika uye yairambidza mapoka enharembozha kushandisa mari yeCCC kutenga michina.
Muna Zvita, Huawei akamhan'arira FCC kuyedza kupedza kurambidzwa, asi mutongi wedare reUnited States Dare akatonga achitsigira FCC.
Iyo "kubvisa zvachose" uye "kutsiva" rutsigiro homwe yeHuawei kana ZTE zvishandiso kubva kunetiweki dzese dzinogona kushandiswa kutenga, kubvarura kana kubhadharisa michina yekutsiva uye masevhisi.
Bhiri rinoedza kudzivirira kusashandiswa zvakanaka kwemari nekuda ISPs kuti ipe "yakazara accounting" yemashandisiro avanoshandisa mari. Democratic neRepublican nhengo dzeImba Yekutengesa Komiti vakatambira basa reSeneti, vachiti:
"Munyika yanhasi yakabatana, ramangwana rehunyanzvi hwesina waya muUnited States zvinoenderana nekuvaka netiweki dzisina kukanganiswa nekune dzimwe nyika," vakadaro muchibvumirano chakabatana China.
Kuvapo kwetekinoroji tekinoroji pane edu network inomiririra kutyisidzira kukuru kune nyika nehupfumi kuchengetedzeka kweUnited States
Tinotenda vatinoshanda navo muSeneti nekuunza ichi chakakosha bipartisan danho kumugumo uye tinovimba Mutungamiriri achasaina kuva mutemo, "vakawedzera vakuru veImba.
Kubatsira ISPs kuwana kutsiva matekinoroji, Bhiri iri rinoraira iyo FCC "kugadzira runyorwa rwemazano kutsiva epanyama uye chaiwo kutaurirana michina, zvishandiso uye manejimendi software. Rondedzero yacho inofanirwa kunge iri "tekombiki kusapindirana".
Iyo FCC zvakare yakavhura online online portal yeIPs inogamuchira FCC mari. kuendesa ruzivo nezvekushandisa kwako kweHuawei neZTE zvishandiso nemasevhisi. Chinangwa chekuunganidzwa kwedatha ndechekuona huwandu hwenhumbi dzeHuawei neZTE pamaficha anobhadharwa neFCC uye nemitengo inosanganisirwa nekubvisa uye kutsiva michina yakadaro.
Bhiri iri rinodawo Federal Commission kuti "izivise" Congress nekukasira kana ichiona kuti $ 1 bhiriyoni haizokwani "kubhadhara zvizere zvirevo zvakatenderwa," izvo Congress ingangofunga kuwedzera fund.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » IUS inotendera bhiri rinorambidza kutengwa kwemidziyo yeHuawei